Micnaha midabbada guduudka, violet iyo lilac ee adduunka naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Dunida waxa jira kumanaan iyo kumanaan midabo oo isu beddela hadba midabka, iftiinka iyo nooca midabka ahaansho. Isku darka midabada kaladuwan waxay ku abuuri karaan shucuur badan dadka, maadaama midabada qaar qofba qofka kale ka doorto. Sababtuna waa midabada waxay la xiriiraan dhadhankeena, shucuurteena iyo waxa abuuraya midabadan inagu dhex jira.
Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale leedahay midabada aad jeceshahay, laakiin qodobkaan waxaan uga hadlaynaa seddex midab oo qurux badan gaar ahaan, Waxay metelaan xarrago, xoog iyo qurux. Waxay yihiin guduud, casaan iyo lilac. Isku darka midabyadaas waxaa loo adeegsadaa aagag kala duwan; kaliya maahan naqshadeynta farshaxanka, laakiin nolosha iyo xitaa seddexdan midab waxay noqon kartaa calaamado ama matalaada waxyaabo gaar ah.
1 Midabada iyo naqshada
2 Violet waxaa lagu qoraa laba dabeecadood oo shakhsiyadeed
Midabada iyo naqshada
Purple iyo lilac asal ahaan waa midabbo walaalo ah violet, kuwaas oo laga soo dheegtay oo kaliya beddelaya carabkeeda.
Midabkan ka dhashay isku darka buluug iyo casaan iyo xoogeeda tani waxay ku xirnaan doontaa heerka isu geynta laga sameeyay midab ama mid kale. Midabka violet wuxuu asal ahaan ka dhigan yahay suugaanta iyo melancholic-ka. Dad badan oo naqshadeeyayaal iyo takhasusleyaal farshaxanno ah ayaa xiriir la leh violet oo ah midab matalaya shakhsiyadda la soo dhex galay, aamusnaan iyo degenaansho.
Haddii aan galno cilmiga sayniska, violet waa mid ka mid ah midabada leh dhererka ugu gaaban, taasi waa, waxaan ka heli karnaa dhamaadka muuqaalka muuqda. Mowjadahaas waxaa isha ku haya isha aadanaha, laakiin markii mowjadaha ay ka bataan waxa ay indhuhu arki karaan waxaa loogu yeeraa "ultraviolet". Intaa waxaa sii dheer, guduud Waa isku darka buluug iyo casaan, laakiin waxaa loo tixgeliyaa midab khafiif ah. Taasi waa sababta aan loogu tixgelin gudaheeda wareegyo badan oo midab leh, maadaama ay tahay midab jilicsan oo leh cod hoose.
Violet waxaa lagu qoraa laba dabeecadood oo shakhsiyadeed
Marka hore, violet waxaa loo tixgeliyaa midab macaan maxaa yeelay waxay ka kooban tahay casaan. Sidoo kale, midabka buluugga ah sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay midab enigmatic ah midabkiisa buluuga ah awgeed. Sida matalaada, midabka midabbada loo yaqaan 'violet' ayaa loo adeegsaday diinta, tan iyo markii ay u taagan tahay dogma iyo tawbad keenka. Sidoo kale, waxay u qaataan sidii midabka fikirka.
Midab violet wuxuu si dhow ula xiriiraa maskaxda sidaa darteedna ay ku milmeen xikmad iyo xusuus. In kasta oo sifooyinkaas cajiibka ah oo dhan, violet waxay leedahay xoogaa diidmo ah, sida loo tixgeliyo midab la xidhiidha xanaaqa, danaysi iyo kalinimo.
Midabka violet iyo noocyadiisa kala duwan waxay leeyihiin waji sasabasho waxaana loo tixgeliyaa midab la xiriira hammuunWaad ku mahadsan tahay casaanka, laakiin qaybteeda buluuga ah awgood ayaa sidoo kale lagu qasi karaa melancholy, xitaa waxay la xiriirtaa jirro. Labadan ulo waxay ka dhigayaan midab buluug midab aad isu beddeli kara.
Isbeddelkani wuxuu ku xirnaan doonaa u janjeedha buluug ama casaan aad leedahay.
Tusaale ahaan, violet waxay u rogtaa lilac mararka qaarkood, taas oo u keenta inay isu beddesho midab u taagan ka fiirsasho togan. Laakiin goorma violet wuxuu isu beddelaa midab buluug ah, ka dibna wuxuu la xiriiraa dheelitirka iyo caddaaladda. Sidoo kale, guduudka waxaa loo qaadan karaa inuu yahay awoodda xaqa ah, isu dheellitirka xoogga nolosha, xigmadda, iyo xoogga ruuxiga ah.
Violet marar badan ayaa ah la xiriirta qabow waxaana loo arkaa mid awood leh, boqortooyo, sharaf, sharaf iyo sharaf. Qaarkood waxay isticmaalaan violet si ay u matalaan iscasilaad, go'aan la'aan, jahwareer, daciifinta kicinta aadanaha. Kaniisada Katooliga aad ayey u isticmaashaa violet waana gaar ahaan wakiil inta lagu jiro Toddobaadka Quduuska ah.
In Lent, ee feejignaanta, Ku soo dhowaanshaha salaadaha iyo afarta jeer ee ka dhex jira Kaniisada Katooliga waxaa lagu ogaan karaa sida violet uu jiro Xitaa guduud waxaa loo isticmaalaa kaydinta hoggaamiyaha kiniisadda iyo kadinal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Midabbo guduud, violet iyo lilac adduunka naqshadeynta ah
Wax ku biirinta weyn ... Lafteeda midabbada aan ugu jeclahay.
Jawaab Luis Montañez
Midabyadu waa muhiim markay tahay qaabeynta